Garena Free Fire. အကောင်းဆုံး Battle Royale မိုလ်ဘိုင်းရှင်သန်ရေးဂိမ်း!
ဇာတ်ကောင်များ မြေပုံ လက်နက်များ တိုက်ပွဲအဖော်
Wallpapers ဗီဒီယို ကာတွန်း ဇာတ်လမ်း
Free Fire သည်ဇူလှိုင်လတွင်၎င်း၏စီစဉ်ထားသောအမှတ်တံဆိပ်ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုမတိုင်ခင် လိုဂိုအသစ်ကိုထုတ်ဖော်ပြခဲ့သည်
Garena has unveiled Free Fire’s new logo, ahead of its official brand refresh this July. The new Free Fire logo will retain key details fans and players are familiar with - the iconic Free Fire knife - while also evokingamore modern and dynamic look that matches the energy of Free Fire’s evolving global community.
- A new font family “Garena Free Fire”, a.ka. “GFF”, co-created by famed type designer, Akira Kobayashi.
- A brand new set of brand graphics inspired by the new Free Fire logo and in-game UI, set to add more realism and intensity to gameplay.
Free Fire သည်ဇူလှိုင်လတွင်၎င်း၏စီစဉ်ထားသောအမှတ်တံဆိပ်ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုမတိုင်ခင် လိုဂိုအသစ်ကိုထုတ်ဖော်ပြခဲ့သည် Free Fire ၏လိုဂိုအသစ်ကို Garena သည်, ၎င်း၏တရားဝင်အမှတ်တံဆိပ်ဇူလှိုင်တွင်ပြန်မဆန်းသစ်ခင်ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ Free Fire လိုဂိုသစ်သည်ပရိသတ်နှင့်ကစားသူများအကျွမ်းတဝင်ရှိသည့်အဓိကသော့ချက်များ - Free Fire ဓါး - Free Fire ၏တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသောကမ္ဘာတစ်ဝန်းအဖွဲ့စည်း၏ စွမ်းအင်နှင့်ကိုက်ညီပြီးအသွင်ပြင်ဖော်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်. 2022-06-22
Rampage ထပ်မံပြန်လာပါပြီ! Free Fire ရဲ့အထင်ကရလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တဲ့ Rampage အစီစဉ်ပြန်သယ်ဆောင်လာပါပြီ၊ ဒီနှစ်မှာ4ကြိမ်မြှောက်ကစားသမားတွေသူတို့ Rampage ဝိညာဉ်နှင့်တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ရမှာပါ! 2022-06-17
3 ဇွန်မှစတင်ပြီး Free Fire သည် ဗုံးအဖွဲ့အင်္ဂါရပ်အသစ်အသင်းနှင့်အတူစိန်ခေါ်မှုကိုစတင်သည်! ဗုံးအဖွဲ့သည်အဆင့်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးအတွေ့ကြုံနှင့်ပြန်လာမည်! ကျွန်ုပ်တို့၏မြေပုံအသစ်: အယ်လ်ပက်စတီလိုမှာဆုံမည်! 2022-06-03
ဂိမ်းလုံခြုံရေး အုပ်ထိန်းသူအတွက်FAQ သီးသန့်မူဝါဒ